Mpanamboatra rakotra paty paty - Mpanamboatra fonosana sy mpamatsy paty any China
1-10 loko vita pirinty vita pirinty Peat Sealing Embossed paty moka roa minitra kapoaka tombo-kase tombo-kase plastika fitaovana
Ny rakotra tombo-kase paty eo no eo dia vokatra mahazatra izay hamehezana ny kaontenera PS, PP, PET ary PE.
Tombo-kase an'ny Anti Barrier Paper Cup ho an'ny tombo-kase kapoaka miisa roa minitra
Taratasy tombo-kase tsy vita amin'ny alim-baravarana ho an'ny vokatra toy ny pate sy ny puddings mihosin-dronono izay manana fomba fandrahoan-tsakafo ary mitaky fahitana metaly ireo vokatra feno entana. Ity fitaovana ity dia mamela ny fividianana mikraoba ataon'ny mpanjifa ihany koa.
Volavola boribory / toradroa PP rakotra tombo-kase ho an'ny kaopy paty eo no eo
Namboarina tamin'ny fitaovana toy ny PP, ny sarony PP famehezana dia azo alaina sary an-tsaina na tsy alefa amin'ny sarimihetsika tsy manjary, metaly na mangarahara. Ny sarimihetsika tsy mangarahara dia manatsara ny kalitaon'ny sary sy ny lokon'ny loko. Ny takelaka PP Sealing dia manohitra tsara ny punctures sy ny ranomaso, tsy misy vy izy ireo amin'ny rafitra fonosana izay mila rafitra fitadiavana vy, ary azo zahana, ka mahatonga azy ireo ho mpinamana be.
Saron'ny tombo-kase fanasitranana PP tsy voaroaka ho an'ny kaopy miody Instant
Ny rakotra tombo-kase manasitrana PP dia miavaka amin'ny alàlan'ny malama amin'ny tampony, miaraka amina endrika kely ao amin'ny faritra misy ny tombo-kase fotsiny. Hita amin'ny hateviny sy endrika maro.
Famehezana hafanana PP Fametahana tombo-kase ho an'ny paty na lovia ramen
Ny tanjaky ny mekanika avo sy ny hamafiny ambonimbony azo avy amin'ny rakotra Heat Sealing PP Sealing dia manolotra faharetana lehibe amin'ny puncture sy ny triatra miantoka ny fahamendrehan'ny vokatra mandritra ny rojom-pamokarana.
Mikasika ny fanontana; Heat Sealing PP rakotra famehezana dia manolotra fahaizana printy tsara sy fananana optique.
voasaron-tava savaranon-taratasy Instant Kraft mandritra ny roa minitra
Anarana: Ampidiro ny fonony paty
Loko: fotsy voajanahary
100-250 micron Embossed Food Grade Pot Noodles Sarony
Fitaovana: sarom-bokotra miendrika Instant Embossed
Habe sy loko: namboarina habe sy loko